Play 19 318
Zadalwa 06-07-2009 16: 44: 39
Kushintshwe 07-06-2012 00: 49: 02
Umbhali: Alejandro Rojas Lucena http://www.simviation.com/fsnd/
Nansi 100% bomdabu FSX-SP2 FSND Boeing 727-200, ngenhliziyo ephelele., ashukumisayo abanikeze asebenza nabo virtual. Ukuziphatha flight namaqiniso ihlolwe ngu abashayeli zangempela. I Izikali ziye ulinganiswe ukunemba imisebenzi enengqondo.
4 alethwe inlcusive: Amercian Airlines, Viasa, Northwest, Lufthansa
Engeza-on quality enhle kakhulu!
Siyabonga Alejandro Rojas Lucena yakhe uhlobo imvume check out indawo yakhehttp://www.simviation.com/fsnd/
I Boeing 727, ngoba isikhathi eside, kusho airliner kwezwe ethandwa kakhulu. I 727 landizela ngokokuqala ngqá ngo 1963. Umtlamo 727 kwaba umphumela ukusilela phakathi Lufthansa, American Airlines and Eastern Airlines phezu ukucushwa kwe Boeing 707 owalandela. Lufthansa nalandela umlando ayefuna kubhalwe-engine ezine izindiza zezindiza at eziphakeme, ikakhulukazi platform yayo mapping Stapleton International Airport. American Airlines wayefuna indiza twin-engine ukuze umsebenzi uhambe kahle izizathu. Eastern Airlines wayenethemba lokuthi ngenxa injini yesithathu izindiza olwandle iCaribbean. Ekugcineni, izindiza ezintathu bavumelana tri, futhi ngaleyo ndlela yazalwa 727.
I 727 kwaba impumelelo enkulu nazo zonke izindiza kuleli sibonga emhlabeni ukuze ikhono layo umhlaba zezindiza emifushane, lapho bekhonza amabanga aphakathi nendawo. Lokhu izindiza bavunyelwe ukuba ukuheha abagibeli abavela emadolobheni aminyene babe zezindiza kodwa ezincane ngase izivakashi izindawo international.
Omunye sici wanika 727 ikhono layo umhlaba zezindiza elifushane kwaba design ekhethekile amaphiko ayo. By nokwelula ukuthunyelwa enezinto nezilandelayo imiphetho, lo 727 babekwazi cishe ngokuphindwe kabili yokufakazela kwalo ebusweni, owamsiza endiza ukuzinza omkhulu aphansi kakhulu ngesivinini esihlaba Umthombo Wikipedia
FSND Boeing 727-200 for FSX-SP2 Thwebula
Incazelo 76 346
Incazelo 45 545
Incazelo 87 789
Incazelo 63 309
Incazelo 25 894
Incazelo 13 127
Incazelo 11 500
Incazelo 118 930